Askarta Shisheeyaha Oo Lagu Weeararay Duleedka Muqdisho. – Calamada.com
Askarta Shisheeyaha Oo Lagu Weeararay Duleedka Muqdisho.
calamada July 23, 2019 1 min read
Weerarkan waxey Ciidamada Mujaahidiinta sigaar ah kaga fuliyeen Inta u dhaxeysa Deegaanada Calamada Iyo Lafoole oo wada dhaca Wadada isku xirta Magaalada Muqdisho Iyo Degmada Afgooye.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa beegsaday oo weeraray Askar ka tirsan Kuwa Kufaarta Afrikaanta kuwaasi oo taagnaay wadada dhinaceeda isla markaana halkaasi gaadiid ku sugayay,waxana goobta ka dhacay dagaal muddo kooban socday.
Askarta Kufaarta Afrikanta oo weerarkan khasaara lagu gaarsiiyay ayaa durba goobta isaga cararay, Waxeyna Wararka la helaya sheegayaan iney jirto Khasaara Nafeet oo Askarta Shisheeyaha lagu gaarsiiyay Weerarkaasi.
Waxa uu weerarkan kusoo aadayaa xilli Saacadihii lasoo dhaafay Ciidamada Mujaahidiinta Howlgala ay ka fuliyeen inta u dhaxeysa Deegaanada Lafoole iyo Carbiska ay nolasha kusoo qabteen askari ka tirsan Maleeshiyaatka Dowladda Federaalka kaasi ay hadda gacanta ku hayaan Ciidamada Shabaabul Mujaaahidiin.
Previous: Imaarada Islaamiga Afghanistan Oo La Wareegtay Magaalo Cusub.
Next: Weeraro Askar Lagu Dilay Gaarina Lagu Qabsaday Oo Sh/hoose Ka Dhacay.